Nabadoon Xaad “Shirka Cadaado Si Habsami Leh Buu Ku Socdaa” – Goobjoog News
Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah waxgaradka ka qeybgalaya shirka ka socda magaalada Cadaado ee lagu soo dhisayo maamulka Galmudug ayaa sheegay in xilligaan shirka uu u socdo qaab habsami ah.
Nabadoonka oo la hadlay Goobjoog News ayaa sheegay in shirkaan hadda uu galay wejigii lagu keeni lahaa xildhibaanada baarlamaanka Galmudug, islamarkaana, lasii wadayo howlaha kale ee ka harsan dhismaha maamulkaasi.
Sidoo kale Nabadoon Xaad ayaa sheegay in weerarkii shalay lagu soo qaaday magaalada Cadaado gaar ahaan halka shirka uu ka socdo aanu waxba u dhimi doonin shirkooda.
Dhinaca kale waxa uu tilmaamay Nabadoonka in ay ogaadeen dhaawaca Laba Askari oo ka mid ah Ciidamada Itoobiya ee ku sugan dagmada Cadaado, kuwaasi oo la sheegay in ay ka hor tageen Gaariga Qaraxa siday oo doonayay inuu gudaha u galo Xarunta Shirka.
Ergada ku shirsan magaalada Cadaado ayaa meel mariyay Dastuurka uu yeelanayo maamulka Galmudu ee dhismahiisa socdo, waxaana dhawaan la filayaa in lasoo xulo xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi.
Madaxweyne Xasan Sheekh “Waxaan Dejinay Hadafyo Muhiim Ah Oo Qeyb Ka Ah Hiigsiga 2016” (Sawirro)